Dukaanka ugu fiican - kaliya maanta - DIGNIIN Horumarinta (-55%)
HA BILOW Kala bedel Muraayadaha Kursiga gacmaha - Qalabka Kala bedel Kabaha & Clothes Dahab - Ilaali
Dukaanka ugu fiican
Dharka quruxda badan, dahabka quruxda badan,
cajalado caan ah oo caan ah oo la yidhaa quruxda
ama kabo xataa xitaa masaafada dheer
ee fasalka ugu sarreeya iyo xuruufta dadka ay xiran yihiin - waxaanu bixinaa dhammaanba
taas oo ku jirta dukaankeenna iyada oo la adeegsanaayo.
Kala bedel Muraayadaha
kaliya maanta 49,00$
1h 35min. 25 Waxyaabaha
ilaa dhammaadka dallacsiinta
Dharka iyo kabaha ma aha kaliya dharka dharka, dahabka iyo saacadaha ma aha kaliya qaar ka mid ah waxyaabaha qurxinta, in aan xirto maalin kasta oo aynu ku muujinno dareenka qaabka iyo xajmiga. Jinsiyado badani waa caddayn ujeedo sharaf leh, xaalad bulsho oo aad u sareysa ama si xoog leh oo is-wacyigelin ah oo ku saabsan kuwa iyaga xiran, kuwaas oo raacaya isbeddellada iyo dharka u habboon, dhar iyo dareen fiican oo dhadhan. Si kastaba ha ahaatee, mar walba ma awoodno inaan awoodno inaan iibsano dharka, boorsooyinka, muraayadaha ama boorsooyinka si toos ah uga soo iibsadaha. Xaaladahaas oo kale, xal weyn ayaa ah in laga faa'iidaysto fursadaha ay ku bixiyaan ilo-soo-saarka muraayadaha, kabaha, saacadaha, iwm. Dhamaantood waxay ka sameysteen qalabka tayada ugu sarreeya, oo ku habboon isticmaalka maalin kasta. Inta ka hartay nasashada, waxay ka yaryihiin oo ka yareeyaan asxaabtooda asalka ah ee tooska ah soo saaraha iyo badankooduna dhab ahaantii waa ay ka adag yihiin kuwa asalka ah. Dukaankeena waxaad ka heli doontaa dhejisyada dharka iyo kabaha, qurxinta sida saacadaha iyo dahabka, iyo sidoo kale gabdhaha gabdhaha: gadaalaha bacaha, muraayadaha iyo boorsooyinka. Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo caalami ah sida Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani iyo Moschino. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad hesho barista faahfaahsan ee bogga internetka.
Waxay u adeegaan laba hawlood, ka ilaalinta qorraxda aadka u badan iyo saameynaha muuqaal kale oo muuqaal ah. Maxay yihiin? Muraayadaha qoraxda, dabcan. Classic, qaababka dhaqameed ee muraayadaha indhoshareerka u socdaa iyada oo loo marayo renaissance hab. Markaad booqaneysid dukaanka muraayadaha muraayadaha indhaha, taas oo leh hanti qaali ah oo aad u fiican, waxaad ka heli kartaa noocyada kala duwan ee noocyada caanka ah iyo naqshadeeyayaasha ixtiraam leh: waxaan ku dammaanad qaadnay qiimo hoose, doorasho soo jiidasho leh iyo adeegyo xirfad leh. Dalabkeena, waxaa jira Qalabka Hearts Hearts, oo aad u caan ah West, iyo sidoo kale noocyo kale oo caan ah, sida Cartier, Bylgari, Versace, Ray Ban iyo, dabcan, Dior iyo Glassino. Dhammaan alaabooyinka si taxadar leh ayaa loo xushay waxaana laga doortay boqolaal nooc oo kala duwan oo laga heli karo suuqa. Tayada tayada ayaa la baaray oo la tijaabiyey, taasina waa sida aan u siino alaab kaliya oo lagu kalsoonaan karo oo kalsooni leh. Muraallo kasta oo muraayadda indhaha DITA, Miu Miu ama Roberto Cavall waa dammaanad tayo sare leh ee wax soo saarka iyo wax soo saarka. Dalabkeena buuxa waxaa si toos ah loogu heli karaa bogga internetka ee macaamiisha https://get2lux.cn/en/123-glasses
Miyuu suurtagal u yahay inuu soo iibsado badeecad tayo sare leh qiimaha ka hooseeya dukaamada dukaamada ama dukaanka rasmiga ah? Miyaad iibsan kartaa badeecad isku mid ah, taas oo ah boorsada ugu dambeysa ee suuqa waxayna ka timaaddaa naqshadeeyayaasha caalamka sida Chloe, Louis Vuitton ama Gucci? Dabcan waxaad awoodi kartaa, haddii meeshii ugu horreysaba, aad ku qanacsan tahay nuqul calaamad ah, taas oo ah, iyada oo aaney ahayn ilaha aan asalka ahayn, macnaheedu ma aha qiimo yar iyo tayada yar. Waxaa intaa dheer, xiddigo iyo dabaalayaal badan iyo xiddigo heer caalami ah ayaa qiray inay isticmaalaan shaandhada wax lagu duubo ee caanka ah iyo naqshadayaasha. Xitaa dalka Poland, dad caan ah oo ka soo baxa shaashadaha tv ma qarinayaan in gardarradooda ay ka kooban yihiin wax ka badan hal shey oo gacanta Prada, Michael Kors, Miu Miu ama boorsooyinka Valentino. Maaddaama tani ay tahay isbeddel caadi ah oo caan ah, maalmahan maxaa yeelay, ma habboona in qofku dhex maro wadada? Dukaamadayada oo leh shaxdooyinkooda ayaa ah jawaabta dalabaadka sii kordhaya ee wax soo saarka ee soo saarayaasha caanka ah, laakiin qiimaha hoose ee soo jiidasho leh. Waxaan soo bandhigeynaa badeecooyin ballaadhan oo ka yimaada naqshadayaasha ugu fiican waxaana ku dammaanad qaadnaa 100% qanacsanaanta. Nidaamo fudud, naqshad jilicsan, naqshad jilicsan iyo qurxin - jaangooyooyin ka soo jeeda naqshadayaasha adduunka iyo noocyada moodada ah waxaa lagu gartaa kaliya tayada sare ee badeecada, laakiin sidoo kale muuqaal gaar ah, aan muuqaal lahayn. Caadiyan ma heli karaan jeebka of a caadiga ah Pole, taas oo ah marka gargaar waxaa la bixiyaa by replica ah Celine, Gucci, Louis Vuitoon ama jeebka Burberry. Dhammaan noocyadaas, iyo kuwo kale oo badan, ayaa laga heli karaa dukaankeenna. Qalabka feyladda ma kala duwan tayada alaabta ama alaabooyinka asalka ah: waxaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo isla isku mid ah ama mid la mid ah, iyada oo la ilaalinayo naqshadaha muuqaalka gaarka ah. Waad ku mahadsan tahay, kumbiyuutar kasta waa mid caan ah oo asalka ah oo kaamil ah qof kasta oo qiimeeya khidada, qaabka iyo xuruufta. Nidaamka gaarka ah ee Christian Louboutin ayaa ah mid aad u fiican oo ah hadiyad iyo muuqaal aan la filayn oo hubaal ah in la aqbali doono. Deeqteena waxaad ka heli doontaa boorsooyinka ragga iyo dumarka labadaba, iyo dalab buuxa ayaa laga heli karaa bogga dukaanka ee cinwaanka soo socda https://get2lux.cn/en/120-wallets
Kursiga gacmaha - Qalabka
kaliya maanta 118,00$
Kala bedel Kabaha & Clothes
kaliya maanta 39,00$
Waxaa jira xaqiiqo ah in bayaanku uu yahay mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee dharka maalinlaha ah ee dumarka. Waa inaanan argagixin, qof walbaa kuma fiicna maaha inuu haysto kabaha ugu weyn ee kabaha dharka, laakiin sidoo kale waxay rabaan inay doortaan noocyo badan oo raaxo leh, moodhlin iyo kuwo xarrago leh. Waxaa ugu fiican haddii ay ka yimaadaan soo saarayaasha oo ku jira adduunka dharka moodada ah ee leh sumcad aan la jeclayn. Kuwa kale waxaa ka mid ah shirkado caan ah oo caalamka ah sida: Christian Louboutin, Gucci, Converse Coca & Cola, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Yeezy iyo Prada. Dhab ahaantii, kabaha ayaa ka duwaya kuwa soo saara kuwaas oo si sahlan u heli kara suuqyada qiimo aad u yar oo soo jiidasho leh, halka tayada, shaqo-abuurka, adkeysiga, xurmada iyo raaxada ee kabahaasi ay weli taagan yihiin heer aad u sarreeya. Cunnooyinka kabaha Gucci, kabaha LV ama Prada ayaa ah jawaabta baahida sii kordheysa ee macaamiisha laga helo adduunka oo dhan kuwaas oo qaddarinaya naqshadaha classic ee kabaha caanka ah isla markaana waqti isku mid ah ay ka warqabaan sharaf weyn oo la xidhiidha lahaanshaha. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad iibsato kabaha kobcinta bogga intarnetka
Cinwaanka lagu muujiyay calaamadda ama calaamada muuqata ee soo saaraha adduunka la yaqaan ee dharka ku jira bulshooyin badani waa calaamad toos ah oo raaxo, hanti iyo sharaf. Si kastaba ha ahaatee, muhiim maaha inaad ku qarashgareyso boqolaal ama xaalado ba'an xitaa kumanaan złotys ah si aad ugu labisan dharka quruxda badan iyo kuwa gaarka ah ama in la xidho dharka oo qaabkiisa uu ku xiran yahay xiddigaha filimada Mareykanka. Kuwani waxay noqon karaan kuwo si wax ku ool ah oo si fudud loogu beddelo dhejiska dharka, kuwaas oo ka samaysan walxaha adkeysiga leh iyo tayada sare leh, iyada oo aan loo eegin asal ahaan, naqshadeynta iyo qaabeynta. Waxaa ka mid ah noocyada sanadaha badani ay yihiin kuwa ugu caansan caalamka, noocyada kor ku xusan waa: Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Louis Vuitton iyo Casadei. Waxaa xusid mudan, in sidoo kale xusuus yar yihiin suuqyada casriga ah ee cusub ee dharka muraayadda ah, sida tusaalooyinka Chanel, Emporio Armani, Hermes iyo Givenchy. Dhar beelaha ayaa ah xal fiican oo loogu talagalay dadka qiimeeya kaydka iyo hantida jeebkooda, laakiin sidoo kale waxay rabaan in ay xiraan dharka tayo fiican leh, adkaysi leh, oo loo qoondeeyey cabbir, muuqaal iyo raaxo leh, oo si fiican uga shaqeyn doona goobaha magaalooyinka iyo ganacsiga shirarka macaamiisha iyo qandaraaslayaasha. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dalabkayaga waxaad ka heli kartaa bogga internetka https://get2lux.cn/en/115-clothing
Waxyaabaha dahabiga ah ama dahabka ah ee qurxinta qoorta, dhegaha, gacmaha ama curyaaminta haweenka adduunka, ama, loo yaqaano qof kasta, dahabiga, waxay noqdeen qayb aan kala go 'lahayn oo dhar ah kumanaan sano ka hor. Waqtiyada casriga ah, mid ka mid ah dhacdooyinka weyn waa midab-takoorka jewelery ee ka soo jeeda qiimaha ugu sarreeya, oo ka imanaya shirkado si fiican loo yaqaan oo loo qaabeeyey, gaar ahaan cajiradaha Tiffany & Co, Chanel iyo Bvlgari. Qaadashada mabaadii'daas ayaa waxay noqdeen kuwo ku badan adduunka, ma ahan mawduuc muran ah, oo hubaal maaha wax laga xishoodo. Replicas waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya dadka caadiga ah, laakiin sidoo kale xiddigaha adduunka, actressada iyo heesayaasha. Marar badan, marar badan oo loo yaqaan 'menss' ayaa la doortaa marwalba, gaar ahaan siyaasiyiinta, kuwaas oo inta badan fursad u leh in ay xirtaan silsilad gaar ah ama asal ah. Markaad fiirineysid dukaanka miraayadaha dahabka ah, oo ka mid ah sida Dior, Piaget ama Louis Vuitton, waxaad ka heli kartaa xulasho aad u badan oo ah dhir kala duwan, santuuqyo, silsilado, qoryaha iyo wax kasta oo dumarku u baahan yihiin. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aragto dukaankeena adoo cabiraya marxaladda wakhtiga waa dhibaato la yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore, laakiin calaamadihii ku jira foomkooda hadda waxaa lagu soo rogay laba boqol qarni kahor. Waqtigaan, ma aha oo kaliya qalab wax ku ool ah, laakiin sidoo kale fikrad fiican ee hadiyad xiiso leh. Xitaa haddii hadiyadahani yahay Rolex watch daawo, oo aan ahayn asalka, qiimaha kumanaan doolar. Markaad go'aansato inaad iibsato nuqul, waxaad u baahan tahay inaad ka war hayso xaqiiqda ah in aysan ahayn wax soo saarka tooska ah ee soo saaraha, laakiin waa xirfad leh oo si taxaddar leh loo soo saaro. In kasta oo ay jirto, Arbacada kasta ee Emporio Armani oo ah hindisaha ku jira dalabkayagu waa sida ugu dhow ee asalka ah ee suurtogalka ah, oo u egtahay si faahfaahsan faahfaahin kasta. Sidoo kale waa runta noocyada kale: Cartier, Hublot, U-boat, TAG Heuer, BREITLING, iyo xataa Rachard Mille. Eeg kalluumeysiga loo soo bandhigo macaamiishayaga ayaa la eegaa, kuwa ugu caansan iyo moodada. Xidididdu waxay ka dhigan tahay xuruufta iyo qaabka, iyo, isla mar ahaantaana, iibsigu ma daadin doono jeebabka macaamiisha ilaa boqolkii la soo dhaafay. Dadka xiiseynaya inay ogaadaan soojeedinta faahfaahsan ee moodada saacadaha dukaanka ah ee laga heli karo dukaanka waxaa lagu martiqaaday inuu booqdo https://get2lux.cn/en/127-waxaa
kaliya maanta 169,00$
Boggaan waxaa ku jira macluumaadka kaliya ee aan ku xirneyn dabiiciga ah. Macluumaadka lagu soo bandhigay boggaan wuxuu ka yimid barnaamijka midnimada, kaas oo shirkadu bixiso alaab ama adeegyo. Qofka ku shaqeeya bogagga ma iibin karo badeecad ama adeegyo ama dhexdhexaadinta iibka noocaas ah. Waa in la xusuusnaado in saameynta ficilku ay ku xiran tahay saadaalinta shakhsi ahaaneed iyo sida joogtada ah loo isticmaalo diyaarinta.